ⓘ ဂရေ့ နာတာလီ
ဂျာကာတာပြည်နယ်၊ ပီနာဘာမြို့ရှိ အမှတ်၃ အထက်တန်းကျောင်း၌ အထက်တန်းအောင်ကာ အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်တက္ကသိုလ် Institute of Business and Infomatics Indonesia တွင် စာရင်းအင်းဘာသာ ဖြင့် ပညာသင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းရှိ တနင်္ဂနွေကျောင်းတွင် အကူသင်အဖြစ်လည်း အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကျောင်းသားများအတွက်ပြုလုပ်သည့် သတင်းထောက်ပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်ဖြစ်သော အက်စီတီဗွီရုပ်သံ၏ ကျောင်းဝင်းထဲကအက်စီတီဗွီ SCTV Goes to Campus ပြိုင်ပွဲတွင် သတင်းထောက်ပညာနှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရသည်။ ဂျာကာတာနယ်တွင် ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင် ထိပ်သီး ၅ ဦးတွင် စာရင်းဝင်သည်။
2. ရုပ်သံ အလုပ်
3. နိုင်ငံရေးသမား ဘဝ
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် တီဗွီဝမ်းမှထွက်ကာ ဆိုင်ဖူ မူဂျာနီ သုတေသနနှင့် အကြံပေး လုပ်ငန်း တွင် အမှုဆောင်ချုပ် ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၄ ရောက်သော် နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ပါတီဝင် ၄ သိန်းကျော်ရှိသည့် အင်ဒိုနီးရှား ညီညွတ်ရေးပါတီ ခေတ်သစ်လူငယ် ပါတီ ဟုလည်းခေါ် ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ခံအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Wikipedia: ဂရေ့ နာတာလီ